Nani oo mar kale diiday inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Manchester United. - Caasimada Online
Home Warar Nani oo mar kale diiday inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Manchester United.
Nani oo mar kale diiday inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Manchester United.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee u dhashay dalka Portugal Luis Nani ayaa hoos u dhigay dalab cusub oo ay Manchester United dooneysay inay qandaraaska ugu kordhiso, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror.
25 jirkaan ayaa ku socda wadadii ka bixin laheyd Old Trafford ka dib markii uu shank u kulan ciyaaray 13 kulan oo ay kooxdiisu dheeshay xilli ciyaareedkan waxaana keydka la cabsiiyey kulankii ay United 3-2 ku dubtay Chelsea.
Xidiga ayaa isbuucii lasoo dhaafay shaki geliyey mustaqbalkiisa ka dib markii ay kooxdiisu gul ka gaartay Braga, wuxuuna sheegay in keliya Ilaah ogyahay inuu kooxda la sii joogayo ama in kale.
Laacibkan ayaa lala xiriirinaayey inuu Janaayo u dhaqaaqo Zenit St Petersburg laakiin waxaa lasoo sheegaya in laga diiday 25 milyan oo ginni ka dib markii uu muran galay mushaarkiisu.
Mogadishu , Somalia.